Manolo-tena amin'ny Trano Maitso ny Sehatra Fanorenana Maneran-tany
nataon'ny admin tamin'ny 21-05-14
Ny Fihaonamben'ny Antoko momba ny fiovan'ny toetr'andro 2015 na 'COP 21', araka ny fantatra kokoa, dia hetsika manerantany mikendry ny hiadiana amin'ny voka-dratsy ateraky ny fiakaran'ny mari-pana. Notanterahina tany Parisy ny fihaonambe tamin’ity taona ity izay niarahan’ny indostria sy ny mpitondra eran-tany nifanakalo hevitra momba ny fomba...
Fampiharana ny sahan'ny insulation sy ny fitsipika volamena
Aiza ho aiza Mba hahazoana trano mafana mafana sy hampihenana ny fahaverezan'ny hafanana araka ny tokony ho izy, manome fampiononana amin'ny ririnina sy amin'ny fahavaratra, ny faritra rehetra mifandray amin'ny ivelany (tafo, rindrina, loft) dia tsy maintsy asiana insulation. Ny fahombiazan'ny hafanana amin'ny insulation dia tokony ho avo be ao amin'ny tafo. Amin'ny ririnina sy fahavaratra,...
Ahoana ny fisafidianana fitaovana insulating
Nahoana no ilaina ny insulation Insulation mba hampihenana ny fanjifana angovo, ny fandotoana feo ary ny fanatsarana ny fampiononana sy ny kalitaon'ny fiainana ao amin'ny trano vaovao na efa misy na inona na inona rafitra fananganana. Ny kalitaon'ny tontolo iainana Insulation dia miady amin'ny fiakaran'ny maripanan'ny tany satria mampihena ny entona mampidi-doza. Insulation ny...